OM: စိတ်ပျက်မိကြောင်း, ဘဏ္ဍာရေး Fair Play - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ • စာမျက်နှာတိုင်း • သတင်းဝေ • အာဖရိကဖိထားပါ • အားကစားများ "OM: စိတ်ပျက်မိကြောင်း, ငွေကြေးမျှတကစား
OM: စိတ်ပျက်မိကြောင်း, ငွေကြေးမျှတကစား
default site ကို 26 မေလ 2019
ပဉ္စမ, စတုတ္ထ, ပဉ္စမ။ OM de ဖရန့် McCourt ရပ်တန်နှငျ့ "သူဌေးက" စိတ်မရှည်။ သူဟာ Jacques-Henri အတည်ပြုဘယ်မှာအင်တာဗျူး၌သူ၏စိတ်ပျက် AFP သို့ခိုလှုံ EyraudMarseille အတွက်ရုံးနှင့် Andoni Zubizaretta ။
ငါသည်ငါ့စိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကရိုးရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်မြင့်ပေါ်ပြီးမြောက်ရန်လိုရာသီရဲ့အစမှာကျနော်တို့စင်မြင့်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းကပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကောင်းစွာကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးမှတ်ချက်အပေါ်ကိုလက်စသတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အဖွဲ့အပေါ်အချို့သောချိန်ညှိဖန်ဆင်းကျွန်တော်ထင်သောကြောင့်ပင်အားကောင်းစေမည်ဟုဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သိ, တခါတရံတွင်အားကစားအတွက်အကောင်းဆုံးထားအစီအစဉ်များကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ငါသူတို့နှင့်အတူမျှဝေ, ပရိသတ်တွေစိတ်ပျက်နေကြသည်ကိုသိပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ကြသည်။ ယခုငါတို့ရှေ့ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘဝကဒီကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့မဟုတျပါဘူး ... ပြဿနာများ၏အပြည့်အဝကြီးတွေ, သေးငယ်သည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေး Fair Play ကျနော်တို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလုပ်မပေးပါဘူး, အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ချိန်ညှိစေရန်နှင့်ငါတို့သည်သူတို့ပြုကြလိမ့်မည်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်လိုက်နာပါ။ ကျနော်တို့ပြီးသား, ကအကြောင်း Jacques-Henri (Eyraud သမ္မတ), ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့် Andoni (Zubizarreta က, အားကစားဒါရိုက်တာ), မရင့်နည်းပြအပြောင်းအလဲ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလုပ်သည်အခြားအပြောင်းအလဲများပြောနေတာစတင်ခဲ့ပါပြီ။ ငါစိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖုန်းခေါ်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဒီအကြှနျုပျတို့ပွုရပါမညျဘယျအရာဖြစ်ပါသည်, အခွင့်အလမ်းများသို့ပြဿနာများကိုလှည့်။
ပထမဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်, (ယင်းကိုစတင်ကရူ Garcia က) ယူခဲ့ပါတယ်အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့, ယခုတွင်ငါတို့သည်သည်သူ၏ကိုအစားထိုးရှာဖွေကြသည်။ ဤသည်ကိုအခြားအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူစီမံကိန်းများ၏နောက်တစ်ဆင့်၏အစဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားရန်ရှိသည်, ငါ Jacques-Henri နှင့် Andoni သည်ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်, အသေးစိတ်ကိုသို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်ဘဏ္ဍာရေး Fair Play ကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအားရှေ့ဆက်ဆက်လက်လိမ့်မည်, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမည့်နှစ်တွင်, ဒီဝေးသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်၏။ သတိပေးခြင်း! ငါ minimize ဖို့မပြောဆို၏။ ပရိသတ်တွေ Jacques-Henri စိတ်ပျက်သည်ငါစိတ်ပျက်မိပါတယ်, စိတ်ပျက်နေကြသည်, ထိုကလပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းစိတ်ပျက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်လို့ပါပဲ။ လူတိုင်းသည်ဤစီမံကိနျးအတှကျခက်ခဲအလုပ်လုပ်တယ်, ငါတို့အများအပြားဆုံးဖြတ်ချက်များရာ၌ခန့်ထားပြီ, ငါတို့ကအလုပ်မလုပ်စေရန်အရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒီတော့ဟုတ်ပါတယ်, တကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အားကစားရဲ့ရှေ့ဆက်သွားပါ။
သငျသညျ reinvest ကြမည်နည်း
ငါငါဖန်ဆင်းသမျှသောကတိကဝတ်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်အစဉ်မပြတ်ငါဒီအပေါ်ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်, ကျနော်တို့ကလပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအားဖြင့်ဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်, နှင့်တစ်ဖန်ယင်း fair- ဘဏ္ဍာရေးကစားအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆုံးဖြတ်ချက်များငါနှင့်ငါ့ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်သာမူတည်ပါဘူး။
ငါငါတို့ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ထားကြောက်ရမည်မဟုတ်သောကွောငျ့တူသောဘာမှပြောမသွားဘူး, ဒါပေမယ့်အခုမသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ပျက်မဟုတ်ကြလျှင်အဖြစ်ပြုလုပ်အသံလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကတဆင့်ရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ခံစားချက်နှင့်အတူနည်းနည်းအသက်ရှင်ရန်ရှိသည်။
ခြေလျင် PSG အသင်း - PSG အသင်း: အဆိုးဆုံးကစားသမားကာတာခေတ်များထဲမှပြန်လည်ရှင်သန်ရန် Bielsa အဆင်သင့်! - ခြေလျင် 01
Youtube ကို: Roland Garros 2019: Monfils, Puglia, Tsonga အဘိဓါန် ... ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေကစားသမားရှာဖွေတွေ့ရှိ